Waxbarashada qofka weyn oo dhinaca Lärcentrum (Xarunta Waxbarashada) - Östersund.se
/ Waxbarashada qofka weyn oo dhinaca Lärcentrum (Xarunta Waxbarashada)
Lärcentrum waxay qeyb ka tahay Degmada Östersund oo waxayna masuul ka tahay dhammaan waxbarashada dadka weyn ee degmada ee Degmada Östersund.
Sida arday qof weyn ah ee Lärcentrum waxaad baran kartaa koorsooyinka iyo barnaamijyada ee heerka dugsiga sare kore sidoo kale sida ­­waxbarashada aasaaska qofka weyn, labadaba gacan ahaan iyo fikrad ahaan. Lärcentrum sidoo kale waxay ku bixisaa koorsooyinka af Swedish oo muhaajiriinta ah (SFI).
Waad dhameystiri kartaa dugsigaaga hoose ama dugsiga sare kore, baran kartaa Swedish, balaarin kartaa xirfadahaaga shaqada ama heli kartaa shahaadooyinka lagu baranayo kulliyada ama jaamacada.
Waa maxay waxbarashada degmada ee dadka weyn?
Waxbarashada dadka weyn waa dadka aanan laheyn, ama aanan dhameystirin, waxbarashada dugsiga hoose ama dugsiga sare, ama shahaadooyinka waxbarasho dheeraad ah. Ujeedada waxbarashada dadka weyn ee degmada adiga ayaa laguugu talo galay inaad gelisid suuqa shaqada. Waxaad baran kartaa waxbarashada dadka weyn ka bilow 1 Luuliyo ee sannadka dhalashadaada 20aad (16 ee SFI).
Warbixin badan waxaa looga heli karaa luuqada kala duwan www.omsvenskaskolan.se qiyaastii waxa waxbarashada dadka weyn ee Sweden iyo noocyada kala duwan ay yihiin.
Waxay ku xirantahay taariiqda aad leedahay ee la xiriirto waxbarashada la soo dhaafay, tusaale ahaan wadankaaga hooyo, iyo waxa xirfadahaaga luuqada ay tahay, waxaan kugu caawin karnaa qaabab kala duwan, tusaale ahaan, SFI, waxbarashada dadka weyn ee u dhiganta heerka dugsiga hoose Swedish ama waxbarashada dadka weyn ee u dhiganto heerka dugsiga sare kore ee Swedish.
Tani waa sida Lärcentrum ay kuu caawin karto
Dugsiga hoose Lärcentrum wuxuu kuugu caawiyaa ku tusiinta wadooyinka dooqyada lagu baranayo, iyo ujeedadeena waa inaad adiga u geshaa bulshada Swedish si dhaqso ah iyo muddada dheer kugu suurtogasho inaad is taageertid.
Lärcentrum waxay ku taalaa bartamaha Östersund ee Kyrkgatan 47. Waxaan furannahay imaanshaha Isniinaha iyo Arbacooyinka u dhaxeeyo 13.00 iyo 16.00. Waqtiyada kale waxaad diyaarsan kartaa booqashadeena.
Haddii aad rabtid inaad diyaarsatid, waxaad midkood wici kartaa 063-14 30 00, ama i-meel u soo diri kartaa larcentrum@ostersund.se.
Kuwaan waa la taliyayaasha waxbarashada ee aad halkaan kula kulmi kartid:
Tani waa sida aan kuu tusno wadada dooqyada waxbarashada
Lärcentrum waxay kugu caawisaa dhinaca waxa loo yaqaan jaheynta waxbarashada iyo xirfada. Tani waxay la micntahay inaad kala hadashid mid ka mid ah la taliyayaashena waxbarashada, tusaale ahaan, dooqyada waxbarashada iyo xirfada. Ujeedada jaheynta waxbarashada iyo xirfada waa ku siintaada sharuudaha lagu galo nidaamka waxbarashada Swedish.
Waxaan ku caawinaa, tusaale ahaan, warbixinta ku saabsan waxbarashada iyo taageerada dhaqaalaha waxbarashada, sharuudaha barnaamijyada iyo shahaadooyinka.
Waxaan sidoo kale kugu caawin karnaa dhinaca waxa loo yaqaan jaheynta wareysiga, halkaas oo aan ka hadleyno mida taageereyso baahidaada iyo sharuudahaaga gaarka ah. Waxaan sidoo kale kugu caawin karnaa koorso waxbarasho gaar ah, ama qorsheynta shahaadadaada ugu dambeyso ama dibloomada dugsiga sare kore.
SFI – Swedish ee Muhaajariinta
Lärcentrum waa wadada waxbarashadaada ee Swedish ee muhaajariinta – SFI.
SFI waa koorso aasaas ah ee luuqada Swedish ee kuwa aanan u aheyn Swedish sida luuqadooda hooyo. Waxaad sidoo kale baraneysaa wax ku saabsan bulshada Swedish, noloshada shaqada iyo dhaqanka Swedish.
Si aad ugu baratid SFI Östersund waa inaad heshaa lambarka furaha gaarka ah buuxo, ee ka weyn 16 oo ka diiwaangashan Degmada Östersund.
Waxaad codsataa SFI adiga oo buuxinayo codsiga onleenka. Haddii caawin u baahantahay ee buuxinta codsigaaga waad nala soo xiriiri kartaa.
Codsiga onleenka ee SFI
Maalgelinada adiga oo waxbaranayo SFI
Kama heli kartid waxa loo yaqaan kaalmada waxbarashada CSN si aad ugu baratid SFI. Qaxootiga hadeer yimid waxay ku baran karaan SFI kaalmada hordhaca. Haddii heleysid nooc kale ee faa’ido ah, tusaale ahaan aad ka heleysid adeegyada bulshada, xafiiska caymiska bulshada ama faa’idada shaqo la’aanta, waxaad u baahaneysaa inaad ogaato waxa ku quseeyo ka hor inta aadan bilaabin waxbarashada.